Shaqada - Xarunta EcoTechnology
Tamarta keydi oo yaree qashinka
Ganacsiyada iyo hay'adaha meelkasta oo ay joogaan waxay ka faa'iideystaan ​​hagaajinta waxqabadka deegaanka iyo gunta hoose. Faa’iidooyinka waxaa ka mid ah caawinta deegaanka, dhimista kharashyada, soo jiidashada macaamiisha, iyo dhiirrigelinta shaqaalaha. Xarunta EcoTechnology waxay la shaqaysaa ganacsiyada, kuwa aan macaash doonka ahayn, isbitaalada, beeraha, kuliyadaha iyo jaamacadaha, iskuulada, iyo ururada kale si loo hagaajiyo howlahooda iyadoo loo marayo waxtarka tamarta, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, iyo yareynta qashinka. Waxaan kaa caawin karnaa aqoonsiga fursadaha ugu weyn ee keydinta kharashka iyadoo la hagaajinayo waxqabadka deegaanka. Waxaan sidoo kale ka caawinnaa ururada qaabeynta iyo hirgelinta barnaamijyada si loo gaaro himilooyinkooda.